Marketing plan for iOS App in Myanmar — MYSTERY ZILLION
Marketing plan for iOS App in Myanmar
App တွေကို App Store ပေါ်ကနေရောင်းတာ Visa, Master တို့ရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာမှာဆို တစ်ချို့သူတွေက Visa, Master မရှိကြပါဘူး..အဲဒါမျိုးဆို Apple Store ပေါ်ကနေ ဝယ်လို့ရနိုင်မယ့် တစ်ခြားနည်းလမ်းရှိ .မရှိသိလိုပါတယ်။
နောက်တရားမဝင် တစ်ခုကတော့ Promo code သုံးပြီး Mobile Store ကနေရောင်းလို့တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်ရင်တောင် App တစ်ခါ Update မှ အခု ၅၀ ရတာဆိုတော့ သိပ်အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး။
မြန်မာမှာ Apple App ကို ရောင်းလို့လွယ်မယ့်၊ Developer ရော၊ Reseller ရော၊ customer ရော အဆင်ပြေမယ့်နည်းရှိရင် သိလိုပါတယ်။
Gift Card နဲ့တော့ တရားဝင်သဘောမျိုး ဝယ်လို့ ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ Gift Card ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိရင် သိလိုပါတယ်။ဝယ်တဲ့သူကတော့ Gift Card တစ်ခုလုံးဝယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။App တစ်ခုချင်းဆီဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ Account နဲ့မဟုတ်ဘဲ တခြား Account နဲ့ ဝင်ပြီး Install ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် (တရားဝင်မဟုတ်တော့ပါ..)
Can't now. You can only sell on jailbreak app in Myanmar.
For app store, need to buy gift card. it's not only for 1 app. It will be US $10 or more
promotional codes က 28 days ပဲရပြီး us မှာဘဲသုံးလိုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ app store ကနေ app ကို approved မလုပ်ခင်အထိသုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတာလားမသိဘူးနော် အစ်ကို။အဲဒီ code က itunes store ရဲ့ itunes gift card ငွေဖြည့်တဲ့နေရာ redeem နေရာမှာထည့်ရမှာလား။အဲဒါဆို အဲဒီ code နဲ့ account ပေါင်း50 ကိုသုံးလို့ရတာလား လုံး၀မသိလို့ပါခင်ဗျာ
yes, promo code still valid until next version upgrade. After upgrade to next version old promo code will not work. Total promo code is only 50.
Promo code use all app store not only us.
You need to put promo code at Reddem (same place like itunes gift card)
April 2014 edited April 2014 Registered Users
အိုင်ပတ်၂မှာငျေးဘရိတ်မလုပ်ဘဲငိမ်းသွင်းချင်ရင်ဘယ်ိုလုပ်ရမလဲကျေးဇူးဲပုရဲ.မေးပို.ပေးပါလာ [email protected] [-O<